कर्मचारीलाई अन्योल र भयमा राखेर समृद्धि भेटिन्छ ? — Himali Sanchar
जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दैन, प्रभावकारी कर्मचारी व्यवस्थापनको खाका ल्याउँदैन, तबसम्म कमजोर मनोबलले ग्रसित प्रशासन संयन्त्रले समृद्धिको यात्रा पूरा गर्न सक्दैन !
यद्यपि, नेपालको सार्वजनिक प्रशासन प्रणालीको परिस्थिति भिन्न छ । कर्मचारीमा सकारात्मक भन्दा नकरात्मक मनोभाव बढी परेको देखिन्छ । राज्यले बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्ने पंक्ति आफ्नो सम्बन्धमा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न समेत वञ्चित छ । नयाँ संरचनामा झनै उत्प्रेरित भई काम गर्नुपर्ने समयमा उनीहरु अवकाशका लागि लालायित देखिन्छन् । करीब दश हजारको हाराहारीमा कर्मचारीहरु स्वेच्छिक अवकाश रोज्नुले उत्प्रेरणाको अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको देखाउँछ । उनीहरुलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने, संघीयताबाट उत्पन्न त्रास र भयलाई न्यूनिकरण गर्नुपर्ने र समृद्धिको यात्रामा सहयात्री बन्नुपर्ने राजनैतिक नेतृत्व पटक्कै गम्भीर देखिँदैन । यसविपरीत राजनीतिक नेतृत्व पंक्ति कर्मचारी वर्गलाई ‘कामचोर’को उपमा दिँदै राज्यकोषमा अनावश्यक ‘लालसा’ राखेको आरोप लगाउन तल्लीन देखिन्छ ।